::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather इमान्दार हुँदा न्याय पाइन्छ भन्ने नजिर बस्यो:: Rojgar Manch ::
इमान्दार हुँदा न्याय पाइन्छ भन्ने नजिर बस्यो
पूर्णबहादुर मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमूखिकरण व्यवसायी महासंघ
आइतवार, २०७३ श्रावण ०९ गते १९:३२
वैदेशिक रोजगार विभागले तालिम नै नदिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने गरेको पाइएको भन्दै दुई दिने तालिम प्रदायक संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमूखिकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले संचालन गरेको सुनगाभा ओरेण्टेशनसहित ४ वटा तालिम दिने सस्थालाई ६ महिना निलम्बनसहित कारवाही ग¥यो । तर, विभागले निलम्बन गरेको डेढ महिना बित्न नपाउँदै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ४ वटै संस्थाको कारवाही फुकुवा ग¥यो र सफाई दियो । विभागले किन कारवाही ग¥यो र मन्त्रालयले किन फुकुवा ग¥यो ? र समग्र अभिमूखिकरण व्यवसायको विषयमा केन्द्रित रहेर रोजगारमञ्चका दिनेश लुईटेलले अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लसँग गरेको छोटो कुराकानी :
तपाईले संचालन गरेको सुनगाभा ओरेण्टेशनसहित ४ वटा तालिम प्रदायक संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारवाहीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले फुकुवा कसरी ग¥यो ?
वैदेशिक रोजगार विभागबाट अभिमूखिकरण तालिम संचालन गर्ने अनुमति पाएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम कक्षा संचालन गर्नुपर्छ । यस क्रममा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड जुनसुकै बेला पनि अनुगमनमा आउने व्यवस्था छ र अनुगमन हुनुपर्छ पनि । हामीले शुरुदेखि नै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । यही सिलसिलामा सुनगाभासहित ४ वटा संस्थामा अनुगमन भयो, यो अनुगमन सुनियोजितरुपमा आवेगमा आएर र फसाउने नियत राखेर गरिएको थियो । किन भन्नुहुन्छ भन्दा १२ देखि १ बजेसम्म नामावली हाल्ने जुन प्रचलन छ त्यो अनुसार हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा नामावली पठायौ । तर फेरी १ बजेर १२ मिनेटमा सुनगाभा ओरेण्टेशनको तर्फबाट विभागमा प्रशिक्षार्थी कम आएकाले क्यान्सिल लिस्ट पठाइसकेका थियौ । लिखितरुपमा जानकारी गराए पनि कहिले काँहि कम्प्युटर अपरेटरले नर्हेला भनेर मौखिकरुपमा पनि जानकारी गराएका थियौ । यती जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि हामी कहाँ अनुगमन गरिएको थियो । त्यो जानाजान, नियतवश र फसाउने नियतले गरिएको थियो भन्ने यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रशिक्षार्थीले सिके सिकेनन् भन्दा पनि त्यो अनुगमन कसैबाट आएको आदेशको भरमा भएको थियो र हामीले त्यती बेला पनि भनेका थियौ यो अनुगमनका विरुद्ध हामी कानुनीढंगबाट लड्छौ भनेर । अदालत जान पनि तयार थियौ हामी । तर, पहिला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन ग¥यौ । मन्त्रालयले हाम्रो पक्षमा निर्णय ग¥यो । विभागले गरेको निर्णय गलत थियो भन्ने मन्त्रालयको निर्णयबाट पुष्टि भयो । यसका लागि मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । विना कारण कारवाहीमा पारिएका ४ वटा तालिम प्रदायक संस्थाले अन्तत ः न्याय पाएका छन् ।
भनेपछि यी संस्थाहरुले सहि काम गरेका रहेछन होइन त ?
स्वभाविकरुपमा यी संस्थाले सहि काम गरेका थिए । कुनै पनि संस्थाले मेरो संस्थामा तालिम लिने प्रशिक्षार्थी छैन भन्दा भन्दै अनुगमन गर्न किन आउने ? जबकि हामीले पठाएको इमेल विभागले अपलोड गर्नु अगावै हामीले करेक्सन मेल पठाइसकेका थियौ । २ बजेर १ मिनेटमा विभागले नामावली अपलोड गरेको छ । यी सबै देख्दा देख्दै पनि अनुगमन गर्न आउनुको उद्देश्य के होला भन्ने सबैले बुझे नि । अनुगमन माथिको शंका आज निमिट्यान्न भएको छ । र, इमान्दार भइयो भने कहि कतैबाट न्याय पाइन्छ भन्ने नजिर बसेको छ । भोलिका दिनमा पनि एउटा निकायले कारवाही गर्दैमा त्यो कारवाही विरुद्ध अन्य ठाँउमा उजुरी दिन सकिन्छ भनेर व्यवसायीले पनि सिकेका छन् ।
तर विभागले गरेको कारवाही मन्त्रालयबाट फुकुवा गराउन अध्यक्ष (तपाईले) ठुलै पावरको प्रयोग गर्नुभयो भन्छन नि ?
यो सरासर गलत आरोप हो । किनभने हामीसँग ऐन, नियमावली र निर्देशिका छ । हामी त्यही बमोजिम चल्ने हो । कसैको पावर र बलमा हुने काम नै होइन यो । किनकि यहाँ ऐन नियम मिचेर कारवाही गरिएको थियो त्यसलाई मन्त्रालयले उल्टाइदिएको मात्र हो । यसरी गलत अर्थले नबुझिदिन सबैलाई अनुरोध गर्छु ।
त्यसो भए अनुगमन गर्न आउँदा तपाईलाई सोधेर आउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
अनुगमन हुनुहुँदैन भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौ । विभाग, मन्त्रालय, बोर्डले चाहेको बेला अनुगमन गर्न सक्छ त्यसमा महासंघको पनि साथ चाहिन्छ भने हामी साथका लागि तयार छौ । वर्षैभरि अनुगमन गरिरहनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छांै । तर नियतवश, मनमा कालो पालेर, गलत सोच विचारका साथ अनुगमन गरिनु हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो भनाई हो । तालिम संचालन भइरहेको अवस्थामा विहान ७ देखि ११ र दिउसो १ देखि ५ बजेको अवधिमा १ सय १४ वटै संस्थामा अनुगमन गरियोस् । तपाईलाई म भनौं, यदि कुनै संस्थाले गलत काम गर्छ भने त्यस्तो संस्थालाई खारेज गरिदिनुस् । तिनको बचाउ गर्न यदि कहिकतैबाट फोन आउछ भने त्यस्तो फोन नै नउठाउनुस् भनेर अहिले पनि भनिरहेको छु । जसरी अहिले म अध्यक्ष भएको हुनाले कारवाही फुकुवा गरियो भनेर दुष्प्रचार गरिदैछ त्यसमा कुनै तुक नै छैन् । बकाइदा ऐन तथा नियमावलीमा टेकेर कारवाही फुकुवा भएको हो ।
तर अहिले जुन रुपमा अनुगमन भैरहेको छ अनि जसरी तपाईहरुले तालिम दिइराख्नु भएको छ । त्यसले विदेशिने कामदारले सहि सूचना पाइरहेका त छैनन नी ?
पहिलो कुरा हामीले वैदेशिक रोजगारको स्थिती के छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । एक त विदेशिने कामदारको संख्या घटेको छ । तर जति कामदार विदेशिइरहेका छन ति सबै कामदारले अभिमूखिकरण तालिम लिएर गएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्दा यहाँ एउटा ठोस विषयवस्तुको उठान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अभिमूखिकरण तालिम अनिवार्य लिनुपर्छ अन्यथा वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिदैन । यी कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सबैले तालिम लिएर विदेश गए गएनन् भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने कही कतै यसमा कमजोरी भयोकि भन्ने झल्को दिन्छ । अभिमूखिकरण तालिमको मुल मर्म अनुसार हामी चलेनौकि, जाने कामदारमा लात्ति हान्ने प्रवृत्ति अझै छ कि भन्ने किसिमको झल्को आइरहेको छ । तर यसो भनिरहँदा समग्र परिवेश खराब छ भन्न मिल्दैन । बरु गलत प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौ । मन्त्रालय तथा विभागले पनि यो विषयमा होमवर्क गरिरहेको छ । प्रविधिलाई साथमा लिन सकेनौ भने कहीकतै कमजोरी हुनसक्छ । ति कमजोरी गर्नेलाई अब हामीले चारैतिर झ्यालढोका थुनेर निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौ र निरन्तर लागिरहनेछौ ।
अभिमूखिकरण तालिमलाई थप व्यवस्थित बनाउन र अहिले देखिएका विकृति कम गर्न प्रि–प्रोसेसिङ तालिमको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि ?
२०६० सालदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा बीचका १२÷१३ वर्षका कालखण्डमा जुन किसिमको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुक्यौ । जाने कामदारलाई काठमाडांैमा मात्र तालिम दिएर हुने रहेनछ । किनकि जाने कामदार काठमाडौंसम्म आइपुग्दा बिचका २÷३ तह पार गरेर आइपुगेको हुन्छ र उ दलालबाट ठगिइसकेको हुन्छ । त्यसकारण अभिमूखिकरण तालिम जिल्ला तहमा लगिनुपर्छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम दुरदराजमा लगिनुपर्छ भनेर महासंघले बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । तर सरकारी निकाय नै उदासिन बनेपछि हाम्रो के लाग्दो रहेछ र ? यहाँ ७ दिन भनियो भने ७ महिना लाग्छ, ७ महिना भन्यो भने ७ वर्ष लाग्छ । महासंघले यसका लागि के गर्नुपर्छ तयार छ भनेर भनिसकेका छौ । मलाई लाग्छ अब धेरै ढिलो नहोला । प्रत्येक जिल्लामा एउटा मात्रै भएपनि प्रि–प्रोसेसिङ तालिम दिने संस्था खोलिनुपर्छ । नेपाल सरकार आफैले त्यो व्यवस्था गर्छ ठिक छ होइन भने हामी निजी संस्था तयार छौ ।
तर जति जे गरेपनि अहिले दिइदै आएको अभिमूखिकरण तालिम तथा पाठयक्रम समयानुकुल भएन यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्न थालिएको छ नि ?
हो, हामीले दुई खाले प्रि प्रोसेसिङ पाठ्यक्रम भनिरहेका छौ । एउटा जिल्ला तहमा र अर्को काठमाडांैमा दिइने अभिमूखिकरण तालिमको यो अति जरुरी भैसकेको छ । अहिले तपाईले भनेजस्तो गुनासो आउनुको कारण चाहि काठमाडौ आउदासम्म कामदारको ६०÷७० प्रतिशत काम सकिसकेको हुन्छ । कुन मुलुक, कुन काम, कस्तो सेवासुविधा मात्र होइन लागत कति लाग्छ भन्ने कुरा बुझनुभन्दा पहिल्यै उसले पैसा बुझाइसकेको हुन्छ । हामीकहाँ तालिम लिन आउदा उनीहरुले एक महत्वपूर्ण चरण पार गरिसकेका हुँदा उसलाई हरेक कुरा बुझ्न कठिनाइ हुन्छ ।
हामीले अहिले यही यर्थाथलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला र केन्द्र तहमा अभिमूखिकरण तालिमको अवधारणा सोचेका हौ । राहदानी लिनुपूर्व जिल्लामै आधारभूत ज्ञान लिने अवसर भएमा त्यो व्यक्ति सिधै मेनपावर कम्पनीमा आइपुग्ने थियो र उसले मेनपावरले गलत ग¥यो भने यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभुत पनि गर्ने थियो । यसो हुँदा बीचका दलालबाट ऊ जोगिन्थ्यो र ठगिको गलपासोमा जाकिन बाध्य हुदैनथ्यो । हामी यही भएर जिल्लास्तरमा र काठमाडौंमा गरी दुई चरणमा अभिमूखिकरण तालिम दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौ यसो हुन सकेमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने समस्या र ठगिका घटनामा धेरै नै कमी आउने थियो ।
अभिमूखिकरण तालिमको क्षेत्रमा अहिले समस्या चाँहि कस्तो देख्नुभएका छ ?
वैदेशिक रोजगार रहर होइन बाध्यता हो यो सबैले बुझन जरुरी छ । आज देश यिनै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ भनिइरहँदा उनीहरु विदेशिदा गर्नुपर्ने लगानी र उनीहरुप्रतिको उत्तरदायीत्वप्रति ध्यान नपु¥याइनु ठुलो कमजोरी हो । यसको आशय उनीहरुलाई विना ज्ञान विदेशिन बाध्य बनाइँदा स्वदेशमा मात्र होइन विदेशी भूमिमा पनि समस्या बढ्दो भयो भन्ने हो । पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालिसम्म जनचेतना फैलाउन सक्नुपथ्र्यो । यसो हुन नसक्दा नै बीचमा खेल्नेहरुले ठुलो अवसर पाइरहेका छन् । यसलाई निमिट्यान्न पार्न अभिमूखिकरण तालिम जिल्ला स्तरमै पु¥याएर व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यसो हुन सकेमा जाने कामदारको पहुँच प्रत्यक्षरुपमा मेनपावर कम्पनीसँग पुग्थ्यो र वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सुरक्षित बन्ने थियो ।
सँधै चर्चामा रहने अभिमूखिकरण तालिम अब व्यवस्थित बन्छ भन्ने आधार छन् त ?
हामीले जहिले पनि निराशावादी सोचाई राख्नुहुन्न । हिजो खोला र झोलामा अभिमूखिकरण तालिम भन्ने अवस्थालाई आज हामीले यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका छौ । अब अर्को फड्को मार्ने अवस्थामा थम्पीङ सिस्टममा जाँदैछौ हामी । यसको अन्तिम तयारीका लागि मेनपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायी र हामी एउटा निचोडमा पुग्दै छौ । अब यो प्रणाली लागू भएपछि एउटा कामदार मेनपावर पुग्दा र छनोट हँुदा अनि मेडिकल पुगेर फिट हुँदासम्म थम्पीङ सिस्टममा रहन्छ अनि हामीकहाँ आउँदा हामी पनि थम्पीङ गरेर विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउँछौ । जब उ श्रम स्वीकृति पाएर उड्न योग्य हुन्छ उसको अन्तिम थम्पीङ एयरपोर्टमा हुन्छ । योग्य भए उड्छन नभए फर्कन्छन् । यसो हँुदा बीचका दलाल मेटिने हाम्रो विश्वास छ । हामी अरु क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बन्दै छौ, यसमा विश्वस्त हुन सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु ।